Iindlela ezi-6 zokuSebenza kunye nabaPhembeleli ngaphandle kweeNkxaso | Martech Zone
Ngelixa abantu abaninzi bekholelwa ukuba intengiso ye-influencer igcinelwe kuphela iinkampani ezinkulu ezinezixhobo ezinkulu, kunokumangalisa ukwazi ukuba ihlala ifuna uhlahlo lwabiwo-mali. Iimveliso ezininzi ziye zaqalisa ukuthengisa impembelelo njengeyona nto iphambili yokuqhuba impumelelo yabo ye-e-commerce, kwaye abanye baye bakwenza oku ngexabiso elinguziro. Abaphembeleli banesakhono esikhulu sokuphucula ukwenziwa kophawu lweenkampani, ukuthembeka, ukuhanjiswa kweendaba, kulandele imidiya yoluntu, utyelelo lwewebhusayithi, kunye neentengiso. Ezinye zazo ngoku zibandakanya iiakhawunti ezinkulu kwiYouTube (cinga abadlali beYouTube abadumileyo abanjengoPewDiePie ngubani onababhalisi be-111M abamangalisayo) okanye iindidi zeeakhawunti ze-niche kumashishini athile (imizekelo yale nto isigulane kunye nabaphembeleli bakagqirha basebenzayo).
Ngentengiso yempembelelo eqikelelweyo ukuba iqhubeke nokukhula I-12.2% ukuya kwi-4.15 yeebhiliyoni zeedola ngo-2022, Iimpawu ezincinci zinokusebenzisana nabaphembeleli ukuba bancede ukuthengisa imveliso kunye neenkonzo zabo, kwaye banokukwenza oku ngexabiso elincinci ngaphandle kweendleko. Nazi iindlela ezi-6 zeempawu ezinokusebenza kunye nabaphembeleli ngaphandle kwenkxaso:
1. IMveliso yeMveliso okanye iSisipho seNkonzo
Enye yeendlela ezilula apho iibrendi zinokusebenza kunye nabaphembeleli ngaphandle kwentlawulo yezithuba zabo kungemveliso okanye ngesipho senkonzo. Banokusebenzisa uluhlu lwabo lwe-inventri kwaye banike abaphembeleli utshintshiselwano apho umntu ophembelelayo abonelela ngesixa esithile seendaba zoluntu. Ingcebiso yepro kukuhlala usiya kubaphembeleli ngokucebisa ukuba ungathanda ukunika isipho ngaphandle kokuqaqambisa eyona parameters yotshintshiselwano. Ngale ndlela, uninzi lwabaphembeleli abaphezulu banokuphendula isicelo sakho njengoko beziva "benyanzelwa" ukuba babuyisele ngaphandle ukungalingani urhwebo. Urhwebo olungalinganiyo kwenzeka xa i-Influencer's Instagram feed post ixabisa ngaphezulu kwemveliso okanye inkonzo ngokwayo.
Uphawu kufuneka luhlale lusazi ukuba abaphembeleli bafumana uninzi kwaye ngamanye amaxesha namakhulu eentengiso zohlobo ngosuku, njengoko kunjalo nabaninzi abaphembeleli abaphezulu. Ngenxa yesi sizathu, ukuba nobuhlobo obongezelelweyo kunye nokuphumla malunga nemigaqo yentsebenziswano kuya kuvumela uphawu ukuba lubonise impembelelo ukuba banomdla ngaphezu "kokukhwaza" okukhawulezayo kwaye endaweni yoko bafuna intsebenziswano yexesha elide.
UBerina Karic, ingcali yentengiso enefuthe kwi I-Arhente yeNtengiso yabaPhembeleli abaPhezulu, ikwacebisa ukuba kulandelelwe ngembeko zakuba zifunyenwe izinto. Ingcebiso yakhe kukungena kumcebisi ukubabuza ukuba basifumene kwaye bayasithanda na isipho sabo, nokuba bafuna ukutshintshisa nantoni na. Olu hlobo lonxibelelwano lobuhlobo lunokubakho amanqaku amakhulu kwaye lubonakalise uphawu.
2. Iihambo ze-Influencer
Uphawu lunokuququzelela uhambo kwaye lubambe abaphembeleli abaninzi kwaye lufumane umyinge ophindwe kashumi wexabiso leendleko zokuhamba, ukutya kunye nendawo yokuhlala. Ngokomzekelo, uphawu lunokusingatha abaphembeleli abahlanu ukuba bahambe baye kwindawo ethile kwaye basebenzise eli xesha njengethuba lokudala umxholo wemveliso kunye nokupapasha izithuba ezininzi zokuphonononga izinto okanye inkonzo. Esi sicwangciso se-PR sisetyenziswa ziimpawu ezininzi zokunethezeka apho zineempembelelo eziphezulu zenza izithuba ezininzi ezikhuthaza uphawu lokuhamba kunye nokuhamba kunye nabanye abadali befuthe. Uhambo lwe-influencer lukwabonelela ngesakhono sokuba uphawu luphuhlise amaqhina asondeleyo kunye nabaphembeleli abanikezela ngebrendi ithuba lokuguqula abona baphembeleli baqhuba kakuhle babe ngoonozakuzaku bohlobo lokuthumela imveliso kwimidiya yoluntu.
Eli qhinga lali uvulindlela ziimpawu zokuqala zentlalo ezifana neRevolve, apho babeza kubamba abaphembeleli abaninzi abaphezulu kwiindawo ezingaqhelekanga ngokutshintshiselana nge-10-15 kwizithuba zesondlo kunye neninzi yeevidiyo zamabali emihla ngemihla ngelixa ubhala uphawu.
3. Iziganeko zempembelelo
Kwezo mpawu zingakwaziyo ukuququzelela iihambo, imisitho yeempembelelo zinokubonisa uhlobo olulawulekayo lwentsebenziswano apho abaphembeleli banokuthumela iziqwenga ezininzi zomxholo ukutshintshiselana nokuzimasa umsitho. Uphawu lunokuququzelela umnyhadala kwi-ofisi yabo, kwindawo yokutyela, okanye kwezinye iindawo zolonwabo kwaye lubonelele ngeebhaskithi zesipho kubaphembeleli ukuba bafumane imveliso okanye inkonzo kumntu. Iqela langaphakathi lisenokudibana nabaphembeleli ubuso ngobuso kwaye lichaze izibonelelo zemveliso ngokuthe ngqo ngelixa livumela abaphembeleli ukuba bafote okanye bafote umboniso wophawu. I-pro-tip kukubonelela a eyodwa kwaye Instagrammable ukuseta apho abaphembeleli banokuthatha iifoto phantsi kweelogo zohlobo lokuhombisa okanye babelane ngoseto lwetafile ezihonjiswe kakuhle ngeenapkins zabo ezizezabo okanye iithegi zogcino.
4. IiNtsebenziswano zeMpawu zoMlingane
Iimveliso zinokwahlula ixabiso lokusindleka umnyhadala okanye uhambo lokuphembelela ngokufikelela kwezinye iibrendi kunye nokwabelana ngethuba labo lephulo lokuphembelela. Iimpawu ezininzi ezingakhuphisani zivuleleke ngokukodwa kolu hlobo lwentsebenziswano njengoko zifumana inzuzo epheleleyo yentsebenziswano ngeqhezu leendleko ngelixa kungekho mfuneko yokunyamezela imizamo epheleleyo yokulawula iphulo elikhulu lokuphembelela. Banokuthatha inxaxheba ngokubandakanya iimveliso zabo kwiibhaskithi zesipho okanye ngokunikezela ngendawo, indawo yokuhlala ehotele, uhambo, okanye olunye uhlobo lwenkonzo ngokuxhomekeke kushishino olukhethekileyo kulo. ebonelela ngesixa esibanzi sokugubungela onke amaqela abandakanyekayo.
5. IMveliso yokuBoleka iMveliso
Kwezo mpawu zingakwaziyo ukunika isipho izinto, ngakumbi xa into ibiza kakhulu okanye iluhlobo oluthile, banokucebisa uhlobo lokuboleka lwentsebenziswano. Olu hlobo lobambiswano luya kubandakanya umntu onempembelelo ekudaleni umxholo usebenzisa into, eyibuyisela emva kokuba ukudubula kugqityiwe, kwaye emva koko babelane ngento kumajelo abo asekuhlaleni. Uninzi lweefemu eziphezulu ze-PR zisebenzisa esi sicwangciso sokuthatha iifoto apho ziboleka iziqwenga kumaqela abahleli kumajelo aphezulu kuphela ukucela ezo zinto ukuba zibuyiselwe emva kokuba ukudubula kugqityiwe. Oku kusebenza kakuhle xa umntu ophembelelayo ekhangela iipropu okanye iziqwenga ezikhethekileyo ukuba zibandakanywe njengenxalenye yomxholo wabo omtsha.
Ukuba uphawu alukwazi ukunika isipho okanye ukuboleka into, banokusebenzisana ne-influencer ngokusebenzisa intsebenziswano yemidiya efanayo. Oku kubandakanya ibhrendi ekhusela ijelo leendaba ngokukhutshwa kweendaba, udliwano-ndlebe, okanye olunye uhlobo lokukhankanywa, kwaye ke kubandakanya nefuthe kwibali labo njengenxalenye ye intengiso enqamlezayo umzamo. Iibrendi zinokuthethathethana ngemigaqo yentsebenziswano kwangaphambili, kwaye emva koko ube nefuthe lokwabelana ngenqaku leendaba kwintlalontle yabo ngelixa befaka uphawu kwintengiso.
Nokuba ingakanani na i-brand, ukusebenza kunye nabaphembeleli kunokungqina ukuba yindlela eneendleko zokuthengisa ishishini kunye nokuphucula uphawu, ukuthengisa, ukubhengezwa kweendaba, kunye nemidiya yoluntu elandelayo. Iimveliso zinokusebenzisa iindlela zobuchule zokuqinisekisa ukuphumelela kwentsebenziswano ngaphandle kokwaphula ibhanki. Ngokuphonononga uhlobo olwahlukileyo lotshintshiselwano lwabaphembeleli, inkampani inokugqiba ukuba leliphi iqhinga elisebenzayo kwaye emva koko iqhubeke nokwakha iinzame zayo zokuthengisa malunga nentsebenziswano ephumeleleyo.
tags: berina karicintsebenziswano yabaphembeleliiminyhadala yempembeleloukuthengisa okunempembeleloiarhente yokuthengisa enefutheintsebenziswano kumajelo eendabaiproducter kuboleka imvelisoimveliso ephembelela isiphoIsipho senkonzo yefutheiihambo ezinempembelelointsebenziswano brand iqabaneinkonzo isiphourhwebo olungalinganiyo